मनिषा कोइराला माथि भा’रतीय मिडियाले गरेको अपमान सारा नेपाली माथि भएको अप’मान हो – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मनिषा कोइराला माथि भा’रतीय मिडियाले गरेको अपमान सारा नेपाली माथि भएको अप’मान हो
कुनैबेला अमिर खानलाई पत्रकारले सोधेका थिए, तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पहिलो काम के ग’र्नुहुन्छ ? ” अरु त म के गर्छु थाहा छैन , तर म हाम्रा सं’चारमाध्यम पुरै परिवर्तन गर्नेछु ।
किनकी हामी कोहि आ’तंकित भएका छौं भने हाम्रा मिडिया नै कारण हुन । ‘ अमिरले भा’रतीय मिडियाको यति अबिश्वास गर्छन् कि कुनै कार्यक्रम गर्दा सबैभन्दा पहिला उनि भार’तीय मि’डियालाई प्रवेश नि’शेध गर्छन् ।
जस्तै उनले केहि दिनदेखि त्यहाँका बि’पन्नलाइ सहयोग गरिरहेका छ्न । तर उनि भा’रतीय मिडियालाई आउन दिंदैनन । केहि दिनअघि मात्र उनले आंटामा सिक्का बाडेंको समा’चारलाइ आफैँले ख’ण्डन मात्र गरेनन् कुनै सहयोग नगरेको ट्वि’ट गरिदिए ।
तर उनका सहयोगी ल’गायत सहयोग पाउनेहरुले अमिरले हरेक दिन स’हयोग गरेको सा’र्वजनिक गरेपछि उनले भा’रतीय मिडियालाई कति घृणा गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । उनि जस्तै भारतीय बौ’द्धिकबर्ग भारतीय मि’डियाबाट टाढा भइ’रहन्छन ।
अहिले मनिषा कोइराला माथि भा’रतीय मिडियाले गरेको अपमान सारा नेपाली माथि भएको अप’मान हो । भा’रतबाट सामान मात्र ने’पाल आउंदैन , महिला हिंसा , सामाजिक अ’न्धविश्वास , कुरिती, अपराध र अप’हरण जस्ता कु’संस्कार भित्रिरहेका छन ।
विभिन्न अ’न्तरास्ट्रिय सामाजिक संस्थाले त दि’ल्लीलाई बलात्कारको राजधानी भ’नेर घोषणा गरेका थिए । एकपटक अमिताभ बच्चनले भनेका थिए , हिन्दुस्तानका बर्बर बलात्कारका स’माचार सुन्दा म भारतीय पुरुष हुं भन्न सकिरहेको छै’न ।”
भारतीय सामाजिक परिवेश त्यति निकृ’ष्ट छ भन्ने उनिहरु स्वंयले प्रमाणित गरेका छन । त्यसै’ले सिमानामा तारवार र भिषा प्रणाली नेपालको अबको आबस्यकता हो ।
Previous मनिषा कोइरालालाई स’लाम गर्दै वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापाले लेखे यस्तो भा’वुक स्टाटस!
Next भारतीय पत्रकारको दा’बी : नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म लिन सक्छ! शे’यर गरौं ।🇳🇵🇳🇵